Umvelisi ogqwesileyo weReishi Black Coffee kunye neFektri | Umthetho
Uhlobo lweKofi: Ikofu yangoko nangoko
Isiqinisekiso: GMP, FDA, NOP, GAP
IBrix (%): 0
Ubukhulu. Ukufuma (%): 0
Izithako eziphambili: I-organic Ganoderma lucidum, iCoffea arabica
Izibonelelo zezeMpilo: Ukukhuthaza inkqubo ye-immue
Amakhowa eReishi aneBeta Glucans (polysaccharides), ii-carbohydrate ezinde ezineyona khompawundi isebenzayo kumakhowa akhulisa amajoni omzimba. I-Beta Glucans ikwaxhasa impilo yamathumbu, enokuthi ikhokelele ekukhuseleni okungcono. Ukuxhasa amajoni omzimba asempilweni kubalulekile xa uzama ukuzikhusela kwingqele nakumkhuhlane.
I-mushroom yeReishi, ehlala ifumaneka njengesongezelelo esenziwe ngomgubo, isetyenziselwe iminyaka kunyango lwaseMpuma. Isetyenziselwe ukunceda ukuphucula amajoni omzimba, ukunciphisa uxinzelelo, ukuphucula ukulala, kunye nokunciphisa ukudinwa.
Ubuhlobo kwiindidi ezahlukeneyo zokutya: I-Vegan, i-Keto, i-Paleo, i-Whole30, i-milk-free okanye i-gluten-free friends.
● Ukuxhasa abathengi kwimveliso entsha ye-R & D, Onke amayeza eKofu yamayeza.
Ngokukhawuleza uJuncao Reishi Premium Cafe Uhlobo lweKofi emnyama yimveliso yekofu yokwenyani emnandi. Yintoni eyenza ukuba iBlack Coffee ikhetheke kangaka kukudityaniswa komgubo ophezulu weGanoderma Lucidum, isondlo esimangalisayo esityebileyo seMushroom esinika amandla, sinceda ukukhupha ityhefu emzimbeni, kwaye sincede ngobumnene ekupheliseni. Olu luhlobo lwe-mushroom, xa lomisiwe, lithatha ubunzima obungaguquguqukiyo obufana nobembotyi yekofu eyomileyo. I-Ganoderma Lucidum ikwanomdla okwekofu kwaye inyusa ukungqindilili, isityebi esityebileyo seembotyi zekofu yeprimiyamu esiyisebenzisayo xa kusenziwa. Kulula ukuyilungiselela kwaye kulula ukuyiphatha.
Ukubonelela ngamandla kunye namandla, ukudinwa okuncinci, kunye nokwandisa amandla engqondo okuvuselela amandla kunye nokwenza uzive umncinci kwaye uqaphele Uqinise amalungu okuphelisa inkunkuma kunye nokuthomalalisa ukomeleza ukomeleza amajoni omzimba Khuthaza ukulala kamnandi ebusuku.
Egqithileyo I-vegan ebomvu ye-lingzhi reishi ekhupha iicapsule
Okulandelayo: 100% Organic Ganoderma Caphula njengezingxobo
UGanoderma Black Coffee
UGanoderma Spore Ikhofi emnyama
Ikhofu eMnyama eMnyama yangoku
Ikhofi eMushroom yangoko nangoko